डायबेटिज पीडितले यसो गरौँ, जानकारीका लागि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला - ज्ञानविज्ञान
डायबेटिज पीडितमध्ये अधिकांश टाइप–टू डायबेटिजबाट ग्रस्त हुन्छन् । यस्तो डायबेटिज भएका व्यक्तिको शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन त हुन्छ, तर यो पर्याप्त हुँदैन । यी चिज नियमित खाने गरेमा उपचारबिनै चिनीको मात्रालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएका उदाहरण छन् ।
यी ७ गल्तिहरु जसले डायबिटिज लगाउँछ
मधुमेह किन हुन्छ ? भनेर कसैले सोधे, कुनै पनि विज्ञसँग यसको एउटा मात्र जवाफ छैन किनभने निकै धेरै कारणहरुे गर्दा मधुमेह हुन्छ । खासगरी अस्वस्थ्य खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली हुनु मधुमेह रोग हुनुको मुल कारण हो ।
हामी जीवनयापनका क्रममा कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ । यहाँ हामी त्यस्तै दैनिक जीवनमा गरिने ७ गल्तिहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसले मधुमेह गराउँछ । यी सात गल्तिहरुका कारणले हुने मधुमेह रोक्न खानु पर्ने ७ खानाको बारेमा पनि हामी यसमै चर्चा गर्नेछौँ ।
यी ७ गल्तिहरु तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् र सकेसम्म यी सात गल्तिहरुलाई कम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुहोस् । कुनै कारणवश या विशेष दिनमा यस्तो कार्य हुनु त्यति खराब नै नहोला तर आफ्नो दैनिक जीवन नै यस्तो छ भने चै बेलैमा सजग हुनै पर्छ ।
१. राती अबेरसम्म बस्नु
राती अबेरसम्म बस्ने, पर्याप्त निन्द्रा नलिने, राती बस्दा चुरोट सेवन गर्ने, रातको समयमा भोजन गर्ने जस्ता बानी छ भने त्यसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ ।
२. घामको कमी
शरीरमा भिटामिन ‘डी’ को कमी भएका मानिसहरुलाई टाइप-२ मधुमेहको खतरा अधिक हुन्छ । खासगरी घाममा नबस्ने व्यक्तिहरु यसको जोखिममा परेका छन् । घाम भिटामिन डिको प्राकृतिक स्रोत हो । बेला बेला घाममा बस्ने गर्नु शरिरका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
तनाव तथा चिन्ता मधुमेहको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ । किनकी तनाव तथा चिन्ताले शरीरले कार्टिसोल नामक हर्मोनको उतपादन गर्छ, जसले इन्सुलिन एक्टिविटीलाई बढाउँछ, यसले रगतमा चिनीको मात्रालाई समेत बढाउँछ ।
४. टेलिभिजनको लत
पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले जनाए अनुसार टिभीको सामु विताएको हरेक घण्टाले मधुमेहको खतरा चार गुणा बढाईदिन्छ ।
५. कसरत नगर्ने
पूरै दिन बसेर काम गर्नु त हुन्न ? अफिसमा झण्डै आठ घण्टा बसेरै काम गर्ने र घरमा गएर पनि टिभीमै दिन व्यतित गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पनि मुटुरोग तथा मधुमेहको जोखिम बढी हुनसक्छ । यसबाहेक तपाई शरिरबाट पसिना निस्किने गरि हरेक दिन कसरत गर्नु हुन्न भने पनि तपाई मुटुरोग र मधुमेहको जोखिममा पर्नु हुन्छ ।
६. नास्ता नगर्ने
के तपाईलाई थाहा छ ? जो मान्छेले विहानका नास्ता गर्दैन, उसले दिनभरमा क्यालोरीयुक्त खानेकुरा तथा बढी चिल्लो खानेकुराको सेवन गरिरहेको हुन्छ । यसबाहेक, शरीरलाई आवश्यक पर्ने खानेकुरा समेत खादैनन् । यसले इन्सुलिनको स्तर बढ्न सक्छ, र मधुमेह हुनसक्छ ।
७. अत्याधिक मात्रामा रिफाइन्ड कार्वोहाइड्रेटको प्रयोग
मैदायुक्त पाउरोटी, सेतो चामल, मैदा लगायतका खाद्यान्नको प्रयोगले शरीरलाई ज्यादामात्रामा इन्सलिन उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ र त्यसलाई शरीरले छिटै सोस्ने गर्छ । यसले गर्दा चाडै चाडै भोक लाग्ने गर्छ । परिणामस्वरुप अधिक खाना खाइन्छ ।
यी खाना जसले डायबिटिज हटाउँछ
दिनहुँ २५ देखि सय ग्रामसम्म मेथीका दाना खाएर रगत र पिसाबमा चिनीको मात्रा कम गर्न सकिन्छ । कति मात्रामा मेथी खाने भन्ने निक्र्याैल गर्नका लागि आयुर्वेदबारे जानकार वैद्यको परामर्श लिन आवश्यक छ ।
मौसम, जरेसिमी, काँक्रो, प्याज, लसुनजस्ता खाना पनि डायबेटिजका रोगीका निम्ति ज्यादै लाभदायक हुन्छन् ।
मकै स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । हरियो मकै पोलेर खान सकिन्छ भने सुकेको मकै भुटेर पनि खान सकिन्छ । तौल घटाउन पनि मकै उपयोगी हुन्छ ।
मकै शरीरमा आवश्यक पर्ने पोषणका लागि जरुरी छ । मकैमा सबै प्रकारका मिनरल हुन्छन । मकैलाई पौष्टिक आहारका रुपमा सबैले खान सक्छन । यसको नियमित प्रयोगले शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न ठूलो सहयोग मिल्छ । मकै अत्यन्तै हेल्दी आहारका रुपमा लिइन्छ ।
गाउँघरमा भुटेको मकै खाजको रुममा लिने गर्छन् जुन स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ । अहिले शहरिया जीवन पनि भुटेको मकैमा लोभिएको छ । तर फिल्म हल वा रेष्टुराँमा खाइने पपकर्न भनिने भुटेको मकै गाउँघरको भन्दा फरक छ।
घरमै भुटेको मकै भन्दा बाहिरको पपकर्न अस्वस्थकर हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । मकैमा धेरै तेल वा घिउ प्रयोग गर्न नहुने उनीहरुको सल्लाह छ । मकैमा लसुन र मरिचको धुलो हालेर खाँदा मुटु बलियो हुने पनि विशेषज्ञहरुको राय छ ।
हरियो मकै खाँदाका फाइदा
भुटेको मकैमा फाइबर हुन्छ जसले शरीरभित्र ब्लड सुगरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । जब शरीरमा पर्याप्त फाइबर हुन्छ, यसले ब्लड सुगर र इन्सुलिनको स्तरलाई नियमित गर्छ । त्यसैले मधुमेहका रोगीहरुलाई भुटेको मकै खाने सल्लाह दिइन्छ
पाेलेकाे मकै पनि उत्तिकै लाभकारी
पोलेको मकैमा पर्याप्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । जसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई रोक्छ र क्यान्सरसँग लड्न पनि मद्दत गर्छ ।
बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पनि पोलेको मकै धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा कोलेस्ट्रोल नगन्य मात्रामा हुन्छ । त्यसैले पोलेको मकै खाँदा मुटु पनि स्वस्थ रहन्छ ।
पोलेको मकै खानाले दाँत बलियो हुन्छ ।
मकै खाइसकेपछि त्यसको खोयालाई भाँचेर सुँघ्दा रुघाखोकी निको हुन्छ ।
त्यति मात्र नभई मकैको खोयालाई सुकाएर जलाएर त्यसको धुवाँ सुँघ्नाले पनि रुघाखोकीमा फाइदा पुर्‍याउँछ । त्यसबाहेक यसले खोकी लागेकोमा पनि निको हुन्छ ।
भुटेकाे मकैकाे पनि स्वास्थ्यमा विषेश फाइदा छन्
भुटेको मकैमा भिटामिन सी, केरोटिनाईड, बायोफ््लेविनाईड हुन्छ जसले रक्त प्रबाहलाई तीब्र बनार्ई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ।यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ ।
भुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमाल्नुहोस । यस पानीलाई छानेर मिश्रि मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किड्नी कम्जोरीको समस्या समाधान हुन्छ ।
भुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोाइड्रेडको मात्र पर्याप्त हुने भएकोले यसले शरिरलाई पर्याप्त उर्जा दिन्छ ।
भुटेको मकै खाँदा दातको व्यायायम गराउँछ । मकै खादा दात सफा गर्ने र बलियो बनाउछ ।
भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् ।
भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरिरमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ ।
यसमा आईरन, भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र प्रर्याप्त हुन्छ । यसले शरिरमा रगत अभावको समस्याबाट जोगाई कम्जोरी हुनबाट बचाउँछ ।
Don't Miss it मिर्गौला थाहै नपाई यसरी बिग्रन सक्छ, त्यसैले बेलैमा यी उपायहरु अपनाउनुहोस् – यस्ता छन् रोकथाम र उपचार
Up Next तरकारीको रुपमा खाने भान्टाले यस्ता रोगहरुलाई जरैबाट निको पार्दछ – जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे
ओठमा कालोपन छ भने चिन्ता नलिनुहोस् यी हुन् सजिलो घरेलु उपचार
अनुहारलाई सुन्दर बनाउने एक महत्वपूर्ण अंग ओठ पनि हो । अनुहारका अन्य भाग राम्रो भए पनि ओठ कुरुप छ भने…
मेवामा भिटमनि ए पाइन्छ । गर्मी मौसममा मेवाको सेवन अमृत समान हुन्छ । यसले विभिन्न रोग संग लड्ने क्षमाता प्रधान…
महिलाले लगाउँने सिन्दुर र गरगहनाले स्वास्थ्यमा के असर गर्छ ? जानी राखौँ